थाहा खबर: 'देखेको देश'मा भोगेका कुरा लिएर आउँदै पत्रकार मैनाली
'देखेको देश'मा भोगेका कुरा लिएर आउँदै पत्रकार मैनाली
काठमाडौं : नेपाली पत्रकारितामा लामो समयदेखि सक्रिय मोहन मैनालीको 'देखेको देश' शनिबार सार्वजनिक हुँदै छ। यसअघि उनका 'उपल्लो थलो' र 'मान्ठा डराएको जुग' प्रकाशन भएका छन्। उपन्यास र काव्यमा आफूलाई उतिसाह्रो सहज नहुने भन्दै उनले यस पुस्तकमा आफ्नो भोगाइ, यात्राका अनुभव, पुस्तक समीक्षा, सामाजिक वस्तुस्थिति र नेपालको राजनीतिक घटनालाई समष्टिगत रूपमा प्रस्तुत गरेको बताए। उनी भन्छन्, 'पुस्तक ठ्याक्कै खिचडी जस्तो छ।'
उनी यस कृतिलाई निबन्धसंग्रह भन्दा फरक नपर्ने बताउँछन्। एकै किसिमको विषयवस्तुमा लेख्दा पाठकहरूलाई मोनोटोनस हुन्छ भनेर उनले विविध पक्ष जोडेर पुस्तक तयार पारेको बताउँछन्। शनिबार सार्वजनिक हुने उक्त पुस्तकभित्र के छ त्यस्तो, जसका कारण पाठकले उक्त पुस्तक पढ्नै पर्छ? उनले आफ्नो पुस्तकभित्र रहेको विषयको बारेमा यसरी बताए।
नेपालको राजतन्त्रको विलय र देशमा जनआन्दोलन समाप्तिको दिन मैनाली अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा थिए। त्यहाँ एउटा नाइजेरियाली कुम्भासँग उनको भेट भयो। कुम्भाले उनलाई नेपालीहरू एकदमै अब्बल र शान्तिप्रिय रहेकाले जस्तोसुकै कठिनाइ पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले हल गर्छन् भनेर सुनाए। मैनालीले चित खाए। 'आबुई! हाम्रो जस्तो सानो देशको बारेमा नाइजेरियनले गरेको यो कुराले कताकता खुसी लाग्यो। कताकता कौतूहल जाग्यो', मोहन भन्छन्, 'उसलाई कसरी थाहा भयो नेपालको कुरा?'
बुझ्दै जाँदा उनले इन्जिनियरिङ भारतमा पढेका रहेछन्। एक पटक घुम्न काठमाडौं आएका रहेछन्। नेपालका राजनीतिक घटनाहरू उनले यही क्रममा बुझ्ने मौका पाएको बताएछन्। उनको नेपालप्रतिको लगाव र उनले नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई वर्णन गरेको यथार्थ कुरालाई मैनालीले 'देखेको देश'मा एक अंशका रूपमा समावेश गरेका छन्।
अर्को घटना कामको क्रममा मैनाली बेलायत पुगे। बुकर भन्ने एक जना बेलायती नागरिक धेरै पहिले उनको गाउँ पुगेका थिए। उनको समाधिस्थलमा पुग्दा यदि उनी अहिले बाँचेको भए केके कुरा गर्दो हुँ? उनी नेपाल आउँदा नेपालको राजनीतिक, सामाजिक स्थिति कस्तो थियो होला भनेर प्रश्न गर्दा उनले कस्ता जवाफ दिँदा हुन्? यी कुरालाई काल्पनिकतामा ढालेर उनले नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवेशको वर्णन गरेको अर्को अंशं 'देखेको देश'मा समावेश गरेका छन्।
पुस्तकमा नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने हिमशृंखलाले नेपाललाई र नेपालीलाई के कसरी निर्देशित गरेको छ र के कस्तो प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ भन्ने कुराको आफैँ प्रश्न सोधेर आफैँ जवाफ दिने जोखिम मोलेका छन्। कतिपय प्रश्न पाठकको जिम्मामा छाडेका छन्। यी यावत प्रश्न र उत्तरको जुहारी पनि 'देखेको देश'मा एक अंश रहेको छ।
मैनाली स्वयम् विगत लामो समयदेखि पत्रकारिता गरिरहेका छन्। लामो अनुभवमा यस क्षेत्रमा देखिएका विषम परिस्थिति र नकारात्मक पक्षहरूको उजागर पनि गरेका छन् पुस्तकमा। बाल्यकालमा भोगेका तीता-मीठा कुराहरू, शिक्षा क्षेत्रकf विकृति र विसगंतिहरू, नेपालको राजनितिक तथा सामाजिक परिवर्तन हुँदा पनि किन यस्ता विकृति र विसंगति उन्मूलन हुन सकेका छैनन् भन्ने कुरालाई समेत समेटेर 'देखेको देश'मा एक अंश स्थान सुरक्षित गरेका छन्।
नेपाल बुझ्न र नेपाली सामाजिक परिवेश बुझ्न यो पुस्तक आम पाठकका लागि लेखेको बताउँदै उनी भन्छन्, 'आफ्नो समाज र भूगोलका बारेका बुझ्नुपर्ने हुन्छ र नबुझ्दा के कस्तो हानि हुन्छ भन्ने कुराको अनुभव पुस्तकमा रहेको छ।' यस पुस्तकका लागि उनले निकै वर्ष खोज अनुसन्धान र मिहिनेत गरेको र पाठकलाई बोर नहोस् भनेर सरल र मिठासपूर्ण तरिकाले लेखेको भएकाले पनि पाठकहरूलाई पुस्तकले निराश नबनाउने तर्क छ उनको। पुस्तकभित्रका केही विषयहरू यसअघि पत्रिकामा छापिइसकेका र पाठकहरूले अत्यधिक मनपराइदिएकाले पनि मैनाली यो पुस्तकबाट पाठक सन्तुष्ट हुनेमा विश्वस्त छन्।
समग्रमा उनी यस पुस्तकलाई नेपालको परिचयको रूपमा व्याख्या गर्छन्। पहिले हामीले पढेको नेपालको परिचय त्यति सही, तथ्यपरक र यथार्थपरक नभएकाले त्यो भ्रम तोड्नुपर्ने जरुरी रहेकाले पनि आफूले यो पुस्तक लेख्नुपरेको बताउँछन् मैनाली।
हाम्रो समाजमा चलिरहेको सामाजिक मान्यता, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक जटिलताका कारण नेपालीलाई के कस्तो असर गरिरहेको छ भन्ने कुराको विविध पक्षको व्याख्या गरिएको छ पुस्तकमा। मैनालीले यस पुस्तकमा लेखनशैली पहिलेको कृतिभन्दा पृथक रहेकाले पाठकहरू दुखी हुनु नपर्ने तर्क राख्छन्।
पुस्तक बुकहिलले प्रकाशन गरेको हो।